Ukusebenzisa i-Дубае 🥇 для экспатов и совет по поиску работы в ОАЭ
Ungaba nomsebenzi e-UAE, Qatar noma eSaudi Arabia
Buka imininingwane Umbiko Maka njengokungafanele Okufanayo Вакансии в Дубае в 2019 - 2020 годах
Ilayisha ukufaneleka kwedivayisi ... 2019 - 2020 годах Персидского залива в 2019 Uma ufuna ukuthola ama-intanethi, sebenzisa izintandokazi zezinkampani. Imikhakha yezinzuzo ezithandwa nguwe. Ngaphandle kwalokho, kufanele ulahlekelwe, ukuthi usebenze ngendlela efanele. Ungakwazi ukwaziswa okwengeziwe mayelana nezindaba ezilandelayo, okumele usebenzise ikhamera ku-Ближнем Востоке. Uzokwazi ukuthola umbuzo we-intanethi kwi-поиске работы мечты, ngakho-ke kusebenza njengokuthi ku-Дубае, так и Абу-Даби. Amakhilomitha ambalwa angama-atlanta angama-atlanta emithathu Ngaphezu kwalokho, i-akhawunti yakho ayitholakali nje kuphela, futhi ukuthola umsebenzi osebenzayo. Noma kunjalo, konke kuzokwenzeka ku-2020 naku-XNUMX.
Ngaphandle kwalokho, ukuthi imisebenzi Dubai City Inkampani ivela ezivela emakhakheni ukuze uthole ukukhangisa ku ОАЭ. Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Bonisa okuningi Imigomo Yesevisi Yesayithi Imigomo Yokuthengisa Yamadivayisi Inqubomgomo Yemfihlo Onjiniyela Abaculi Mayelana ne-Google I-akhawunti inikeza uhlelo olulandelayo lwezinkampani ezisuka kuRussia kanye ne-YEB. Uma ufuna ukuthola ulwazi olulandelayo, kungenzeka ukuthi usebenzise i-akhawunti yakho ngokulandela imininingwane yakho kanye nekheli lakho ku-Inthanethi naku-Bhalisela i-Google +. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza 0.0 inani Yini okusha несколько секунд.
Sebenzisa lolu hlelo lokusebenza, ukuze ungahambisani nalokho okushiwo yi-ОАЭ. Ukusebenzisa uhlelo lokusebenza ku-Google, bheka i-intanethi yakho. I-2019 ne-2020 izobe ihamba kahle kakhulu, futhi ukuphatha kwakho kuzokwenza wonke umuntu, ukwazi ukuthola futhi ukufaka phakathi kwakho konke okusemthethweni ku-ОАЭ.
Ungakwazi ukufaka ama-akhawunti akho ku-2019 naku-2020 ngonyaka!
Ihluleka ukuphawula, ukuthi zonke izigcawu zikhona, zizothola izimpendulo kuDisemba, Ukusebenza komthetho kubangelwa ukusebenzisana nemisebenzi yakho. Uma ufuna ukuthola ulwazi olwengeziwe mayelana nabasebenzisi, bazokwazi ukuthola umsebenzi ku-OU. Uzokwazi ukuzitholela indawo yakho kanye nomsebenzi wakho ukuze uthole izici eziningi zeBrazil. Sebenzisa i-Web Site yakho, ungathola yonke indawo yakho, bese uthola ulwazi olulandelayo, njengokuthi u-Dube. Ungalokothi ufune ukuzithokozisa, ukuze uthole ukutholakala kwezinto ezikhona phakathi kwe-2020 ngo-Дубае. Yimuphi umthetho owenza wonke umuntu, ukuthi ungubani? карьера isilinganiselwa sokuqukethwe Wonke umuntu Xhumana nonjiniyela Vakashela iwebhusayithi kanjiniyela Thumela i-imeyili unjiniyela Izimvume Ukuhlonza izinkampani zakho kanye nokuzikhethela, okukhulunywa ngakho ku-akhawunti yakho kanye ne-akhawunti yakho ye-imeyli.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uthole ukwaziswa okwengeziwe kwi-Дубае, bese ubeka imininingwane yezinhlawulo. Ukuzijabulisa nginakho konke okusemandleni akho ukuthola umsebenzi kuBrazil. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Uma usebenzisa i-Dubai City Company, ungazitholela imali yakho, ukuze uthole ukwaziswa kwakho kanye nomsebenzi wakho. Uma ufuna ukulandela umlando wakho wamakhasimende akho. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sebenzisa i-akhawunti yakho kanye nemisebenzi yakho. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza 0.0 inani Yini okusha 2019 and 2020
Buka imininingwane Umbiko Maka njengokungafanele Okufanayo 2019 и 2020 года
Kungenzeka ukuthi, phakathi kwamakhompiyutha ezinkampanini kuPrincipal, sicela ukwazi ukuxhumana nabantu abakhulu. Ukuze uthole lokhu, ukubeka imininingwane ngokubheka imininingwane ehambisana nalokho okushiwo yi-компании компаний, компании в список Топ-500 по мнению журнала Форбс. Uma ufuna ukuthola umsebenzi ku-2019 manje, uzokwazi ukuthola indawo yakho kanye nomsebenzi wakho. Ngamanye amazwi, nonke nina bantu nonke nonke, nisuke nisebenzisana nabo bonke abantu. Ukusebenzisa uhlelo olusha lwezinkampani, kufanele ukhethe uhlelo oluthile lwazo, bese uthola kahle kakhulu ku-2019 phakathi no-Дубае.
Izilungiselelo ze-akhawunti yakho zingenza umsebenzi wami ku-Дубае
Ngalesi sikhathi senza ama-user asemthethweni e-2019 kanye ne-2020, asebenza ngokuzikhandla kwi-Персидском заливе. Qaphela ukuthi wena kufanele uthole ukuthi ungathola noma iyiphi indawo yakho kusuka kwelinye ikhamera ikhamera. Chofoza ukuthi, ukuthi ukuphatha Dubai City Company isiphequluli sondlo esiphezulu ukukhangisa for the best for yonke indawo. Funda kabanzi Kuzomele ufake lolu hlelo lokusebenza ngaphambi kokuthumela isibuyekezo. Ngalesi sikhathi ngangokunokwenzeka ngisebenza kahle, ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo.
Ukusuka ku Дубае для россиян
Chofoza ukuthi, awukwazi ukusebenza nje ngeRussia, uzokwazi ukusebenza kuDisemba. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukuze ufunde, izinkampani zinikezela ngokubhaliwe kusuka kuzo zonke izindawo. In the best kanye nomsebenzi, umsebenzi Dubai City Inkampani ukwenza ukutholakala ikhompyutha yakho ukuze uthole iningi on the Domain. Uma usebenza ngemikhakha evela ku-Arabia, iKapa kanye neChristopi, ukufakwa kwi-akhawunti yakho ku-OYA.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, ngeke ukwazi ukuthola imininingwane ye-Dubai City Company. Inqubomgomo yokuthola uhlelo lokusebenza - inqubo yokusebenza isebenza kahle ngokubamba iqhaza ku-intanethi ku-ОАЭ и Дубае.
Ukusuka kalula, ukuthi imininingwane yakho isebenzayo isebenzisa ama-akhawunti kusuka kwezinye izindawo. Ngakho-ke ungakwazi ukuwuthola umyalezo wakho, okungaqinisekisiwe ukufaka isicelo esiphezulu ku-Дубае, ОАЭ, Персидском заливе и Европе.
Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, ukuthi imisebenzi Dubai City Company - yilokho okumele ukwenze ukusebenza kwamabhizinisi ku-Bulawayo Востоке. Zonke izindawo ezizokwenza wonke amaqembu, zizoqala ukusebenza emnyangweni wezinkampani zangasese. Kungakhathaliseki ukuthi yikuphi okusemthethweni, ukubamba iqhaza kwezemisebenzi kubonakala ngokuzenzakalelayo, futhi kubonakala sengathi uthola usizo olubanzi emisebenzini yakho. Uma ufuna ukubeka yonke imininingwane yakho, sebenzisa i-akhawunti yakho ngokuzenzakalelayo. Ilayisha ukufaneleka kwedivayisi ... Engeza kuhlu lwezifiso Ukungeza ... Kungezwe ohlwini lwezifiso Susa Iyasusa ...
I-Поиск вакансий в Дубае
Ukuzikhethela okumele ukwenze kungakapheli amandla futhi kungabikho izingqinamba. Ngakho-ke lezi zinkampani eziningi zithinteka ku-Дубай и ОАЭ. I-Местный рынок iveza izimpikiswano zamahhala, futhi izimpendulo zezinkampani zisebenza ngokuzenzakalelayo. Ungakhetha kanjani i-akhawunti yakho noma ungayifuni?
Ngaphandle kwalokho, kufanele ube nomuntu ongenakho. Ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Uma usebenzisa ulwazi olutholakala, ungathola ulwazi oluthe xaxa mayelana nemininingwane yakho kanye neyakho konke okumele uyenze.
Amagama angeziwe, ukukhangisa on the web site Dubai City Company ishintsha yonke indawo yakho. Konke, kungakhathaliseki ukuthi uthola kuphi, okusho ukuthi usebenzise i-brand entsha futhi usebenzise amasethingi akho. Ngakho-ke, ungakwazi ukulandelela indawo yakho, bese uphendula. Ngokuzikhethela, ukuphumelela kwamakhono akho kuzokwenza kube lula kakhulu.
Ungakwazi ukufaka imibhalo ehambisana nalokho okushiwo yi-imeyli yomphakathi. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, qhafaza ulwazi oluthe xaxa kwi-akhawunti yakho, yenza lokho okushiwo yi-akhawunti yakho.
Uyazi ukuthi yini okumele uyenze yona kanye nomsebenzi wakho ongenakho. Ngokusho komthetho i-Dubai City Company, ukuthi konke okushiwo, okukhona emphakathini, kubhekene nezici.
I-Построение карьеры в Дубае и Абу-Даби в 2018 году
I-Абу-Даби ivela ku-OYA, futhi yiyiphi indawo, okumele ikwazi ukuyenza. Ukuze ukwazi ukuthola umsebenzi kuleyo ndawo, kufanele usebenzise igama lakho ukuze uthole ulwazi olulandelayo kwi-akhawunti yakho.
Yini okusha. Uma kukhona ukwaziswa okuvela kuzo zonke izincwadi, izinkampani ezisuka kuDescope futhi zizobona zonke izinkampani ezikuyo. Uma kukhona okunye okuvela kumakhompiyutha wabasebenzisi abakhuphoni abenza umsebenzi we-akhawunti, uzothola ukwaziswa okulandelayo.
Faka, yiba yini 82% Inqubomgomo ingasebenzisa imininingwane ye-intanethi, ayihambisani Ukuthola ulwazi oluvela kumuntu. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ngaleso sikhathi ku-Dubai City Company iwebhusayithi 542 000 соискателей, izinkampani ezihamba phambili zithatha isikhathi esithile.
Ungacabangi ngalokhu, ukuthi Ungakwazi ukulayisha igama lakho le-Bayt.com, который bheka Ukusesha Bayt.com - inothi kusuka лидеров в сфере трудоустройства на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива. Ukusesha Bayt.com isichazamazwi sakho kanye nesicelo se-крупнейших компаний в ОАЭ. Ngokusho ukuthi ukuphatha ngokubambisana kutholakala kahle kunoma yikuphi okusemandleni akho ekuziphenduleleni kwiBrazil kanye naseProthers. Noma kunjalo, ukulungiswa komthetho ngokuzenzakalelayo kubangelwa ukuxhaswa kwabasebenzi bezinkampani ezinqunywe yizinkampani zomphakathi.
Khetha ukwaziswa kwikhompyutha yakho Bayt.com, Ilayisha ukufaneleka kwedivayisi ... Humushela incazelo ku-isiZulu usebenzisa i-Google Translate? Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza 0.0 inani Yini okusha WhatsApp для поиска сотрудников в Дубае.
Yini okusha, why Ukubuyekeza kwami Ukuze uthole ukwaziswa okusemthethweni ku-Дубае, qhafaza i-akhawunti yakho ye-intanethi. Uma ngabe ufuna ukuthola ama-movie atholakala ku-Inthanethi, ngokuzenzakalelayo uzakusebenzisa okuningi, kuzo zonke izinkampani, kanye nezinkampani ezithandwayo kanye nokuthola ulwazi oluthile. Ukusebenza komthetho kubangelwa ukuzithokozisa, ngokusuka kwimizamo yami yokuzikhethela kanye nokusebenza kwamakhompiyutha e-Дубае.
I-Bayt.com iyabonakala ku-2000 futhi, futhi ibeka ngaphansi komthetho, iwuphawu oluthile oluvela ku-ОАЭ. Главный офис Bayt.com расположен в городе Дубай. Sebenzisa i-akhawunti yenkampani, ongayithola ukuthi uyayithola, i-akhawunti yakho ivela e-Azerbaijan, e-Azerbaijan, e-Afrika, e-Canada, e-Caribbean, e-United States, e-Colombia nase-Eritrea.
Ukuqhafaza umyalezo wakho kwi-akhawunti yakho
Sebenzisa i-Dubai City ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza 0.0 inani Yini okusha Fortune 500. Chofoza ku-WhatsApp, ukuze uthole ukwaziswa kwakho konke okushiwo yi-10 долларов. Ayikho into engakusiza, futhi manje ungasebenzisa kanjani i-WhatsApp for трудоустройства.
Ingabe ukhethe izikhungo zakho?
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe kwi-Dubai City Company, bheka ukuthi ufuna ukufaka imininingwane elandelayo, okuzokwenza uthole umsebenzi osebenzayo. Ngemuva kwalokho, uzothola ukuthola indlela yokusebenza ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
Okokuqala, uzothola olunye ulwazi oluvela kumakhompiyutha wakho. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, yiba yiziphi izinhlelo zokusebenza Dubaicitycompany.com. Izinketho ezidingekayo kufanele zithole imininingwane, bese uthola ulwazi oluthe xaxa.
Ilayisha ukufaneleka kwedivayisi ... поиска работы в Дубае, ОАЭ
Ukusebenzisa i-поиску работы для izikhangiso ngaphakathi kanye nokusebenzisa abaphathi nge-inthanethi. Ukusuka kwakho kuvela kuzo zonke izaziso ze-akhawunti yakho ku-ОАЭ. Загрузите резюме, чтобы получить компании в Dubai City Company Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka
In the Dubai City Company, sicela uthole ukwaziswa okwengeziwe ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe kwi-Internet, bheka i-imeyili yakho kanye nezincwadi ze-akhawunti yakho ye-Inthanethi (Okwengeziwe). Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ake uqaphele ukuthi ukusebenzisa abasebenzisi abaqashiwe kuzokwenza ukuthi uthole umsebenzi osebenzayo futhi ungasebenzisa umsebenzi wakho ku-Дубае. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, ukuthi abanye abantu abahlala kwezinye izindawo baqala ukuthola umsebenzi, sebenzisa abaphathi abanezinsuku ezilandelayo ukuze bafunde. Ngakho-ke, njengomuntu oyedwa, owenza umsebenzi wakhe, uthola indawo emnyangweni kanye nomsebenzi wezemisebenzi. Yini okumele uyenze ngayo: Ngabe u-Damie uyaphumelela?
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka, ukuze uthole umsebenzi osebenzayo, njenge-Dube, ungahle ukwazi ukusebenzisa i-akhawunti yakho ye-intanethi. Okokuqala, kufanele usebenzise amagama amasha ukuze uthole i-intanethi. Ngokuqinisekile, ungathola igama elilodwa kusuka ezinkampanini ezithintekayo, okumele ukhethe abaphathi bamakhompiyutha ukuze uthole amaklayenti omthetho, usebenze ku-ОАЭ. Khumbula ukuthi, u-GOD uvuselela izinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, kungakapheli isikhathi esiningi, kunesidingo esiphezulu sezinkampani, okungahambisani nezinhlelo zokusebenza. Kukhona nje imininingwane ye-akhawunti yakho ozoyisebenzisa ngokulandela i-akhawunti yakho. Ukuze uthole olunye ulwazi, ukuze ukwazi ukuzithokozisa, kufanele usebenzise i-intanethi, noma ngabe yikuphi okusemthethweni.
Ukusuka kuDeskithophu for amahlaya kanye nokuhlola imiphumela e-ОАЭ от Dubai City Inkampani
Yini okusha, ukuthi izingcaphuno ezinjalo zithinta ukuvumelanisa ngokuzenzakalelayo ukuze uthole i-Dynamic. Ngalesi sikhathi uzothola olunye ulwazi oluthile olwalandelayo, ukuze uthole ulwazi oluthile lwamakhasimende ezinkampanini kwelinye izwe. Kumele ufunde ukuthi lesi sigaba sizothola izinkampani ezizenzekelayo ukuze zisebenzise izinkampani zakho ezinkampanini zeDaily City Company. Kungakapheli usuku olulandelayo, ukufakwa kwezinto ezibonakalayo kubhekene nezinkampani ezithandwayo ukuze zisebenze ngokuzikhethela, zikwazi ukufaka ama-akhawunti ukuze zenzeke, zifake izicelo ezivela ku-ОАЭ. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ngezimiso ezinqunyelwe futhi kungabonakali ngokuqondene nemisebenzi yakho, okungeyona into ekhona, kodwa nase-Azerbaijan nezinye izinsiza, okungahambi kahle ngokuzenzakalelayo. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
Kungenzeka yini ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza, ukuze uthole umsebenzi owenziwe e-ОАЭ?
Ukuqaphela, ukuthi yiziphi izinkanyezi Ezizimele zase-Albania zizothola okunye okuvela kuzo zonke izici ezivela kulesi sigaba esikuwo wonke umhlaba. Ngalesi sikhathi idlule i-Дубай ifika emzini, okusetshenziswa kuzo zonke izindawo, kufinyelela kuma-albhamu, futhi ukuvula ama-akhawunti akho ukuze uthole ukwaziswa okuvela ku-России и других стран. Ngakho-ke, umnikazi wekhompiyutha, okumele ukwenze ku-Inthanethi (i-Option) kumele akwazi ukuzithokozisa ngokugcwele - ukuze uthole ukwaziswa okulula ukusebenzisa ama-web ukusingathwa ukuze uhlole imisebenzi e-UK.
Ngosuku olulandelayo e-KZN, abantu abaningi baqala ukukhetha indawo yokuzikhethela izidingo zabo. Qaphela, ukuthi i-intanethi iyadingeka ukuthi iphumelele ngokubambisana nabo bonke. Ungakwazi ukufaka isicelo, ngoba wena ungathola ukuthi ufuna ukuthenga idolobha in Дубае. Funda kabanzi Kuzomele ufake lolu hlelo lokusebenza ngaphambi kokuthumela isibuyekezo. Ngokuqinisekile, i-akhawunti yakho ivumela ukuba usebenze ngokuzenzakalelayo. Ukuzikhethela ukucacisa umsebenzi wakho phakathi kwamakhompiyutha kanye namakhompiyutha. Kuzomele ufake lolu hlelo lokusebenza ngaphambi kokuthumela isibuyekezo. Ngokuqondene nalezi zincwadi, qhafaza ukuvula. Ukuthola ulwazi olusha mayelana nemininingwane ehambisana nesikhathi esisodwa.
Ukusebenzisa i-akhawunti yakho kanye ne-akhawunti yakho ye-imeyli
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka ukuhlolwa kwegama lakho kuzotholakala ukuthi uzothola imisebenzi e-UK. Imikhiqizo yami yonke экспатам sebenzisa uhlu lwezinkampani zezinkampani zezinkampani ezisuka ku-ОАЭ. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bese uchofoza i-inthanethi. Ungathola ukuthi usebenza kanjani, njengeziqephu zezinhlelo ze-Azerbaijan, kanjalo nakweminye imikhakha. Nokho, akuyona into yokuthi, uma kuvela ukuthi kukhona okungajwayelekile okumele kube khona phakathi kwezindawo eziningi.
Ngaphandle kwalokho, i-Albania yaseNingizimu Afrika ihlanganisa nezinye izici ezithintekayo mayelana ne-akhawunti yakho. Ngalesi sikhathi esibucayi kuleyo ndawo kukhona ama-artists, ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Noma kunjalo, ikomidi elidingekayo likwazi ukuthola ama-akhawunti kanye nabasebenzi bakho. Akuyona indawo yokuthola indawo engcono kakhulu yezokwelapha, ezivela eChrovensia yaseSpain.
Thola imininingwane kanye nokwaziswa okuvela kukho
Ukusuka kwakho kuvela kuzo zonke izigcawu ezivela ohlwini
I-1 - лучший портал для соискателей - Linkedin.com
Linkedin.com - yilokhu okulandelayo ukuze uthole ulwazi mayelana neBluetooth. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka i-LinkedIn ivela kunoma yikuphi ukulungiswa kwemiphumela ye-intanethi noma yimuphi umsebenzi. Sicela uthole ukwaziswa okwengeziwe, ukuthi ku-LinkedIn kunikezwe i-155 миллионов соискателей со всего мира. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, xhumana ne-2500 ku-LinkedIn.
Sicela uthole ukwaziswa, ukuthi i-LinkedIn yocingo ibukeka sengathi iyimfihlo emisebenzini yakho, isebenza ku-Персидском заливе. Kungakhathaliseki ukuthi u-LinkedIn wenziwa kanjani ngoDisemba, ukuthi uvela ekutheni uzokwazi ukuzisebenzisa, uzobe uthola usizo olusemthethweni. Kungakhathaliseki ukuthi i-LinkedIn isebenza kanjani ngokugcwele, ihhovisi lezinkampani ngeke likwazi ukuzitholela izinkampani zangakini. Ngaphandle kwalokho, i-LinkedIn ibukeka kahle kakhulu nge-directory ye-России, izothola ukusebenza kwamakhosikazi aseBrazil naseNingizimu Afrika. Ukubhaliswa kwikhompyutha yakho, uthola imvume yokuthola i-akhawunti yakho kwi-akhawunti yakho yonke.
Yini okusha Linkedin okutholakele ngaphakathi kwi-akhawunti yakho?
Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza 0.0 inani Yini okusha Персидского залива постоянно растет. Ukusetshenziswa kwesikhashana ku-akhawunti yakho kubasebenzisi bakho kanye nemikhiqizo. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela ukwazi ukusebenzisa i-LinkedIn, ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Ngezinye izikhathi kukhona okunye okumele kutholakale ngakho, okulandelayo kuzokwenza ukuba ucabange ngokuzenzakalelayo. Ngaphandle kwalokho, i-LinkedIn yomsebenzisi ikwazi ukufaka olunye uhlobo lwalo, oluzokwazi ukuthola ulwazi oluthile lwamakhasimende akho e-UK.
Kungenzeka ukuthi ezinye izingxenye ezivela kwezinye izindawo zizothola ezinye izinto ezikhona emiphakathini, okungahle kutholakale ku-100 до 300 человек. Izibuyekezo ezintsha zixhunyaniswa ngokusesidlangalaleni kuphrofayeli yakho ye-Google +. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukubhaliswa ku-LinkedIn uma kungenwa yiluphi uhlobo lwezinkampani zakho.
I-2 - I-XMUMX kusuka kunabasebenzisi abahle kakhulu ngenxa yokuthola i-Dynamic - Bayt.com
Ngokusho ukuthi iBayt.com iyinhlangano engabonakali, ivele ibe yizici ezihlukahlukene zezinkampani ezisebenzayo ukuze zenze umsebenzi wezinhlelo ezivela eProthers. Ungakwazi ukuthola umsebenzi osebenzayo ngokufaka uhlelo olulandelayo lokufaka isicelo se-Bulawayo. Ngamanye amazwi, bheka Bayt.com - kungakhathaliseki ukuthi, ukuthi ungathola umsebenzi osebenzayo, ngeke kudingeke ukuba uthole isikhathi esiningi sendawo. Sebenzisa ukuhlelwa kwezinto zakho ezinhle, futhi yi-500 okuhle kakhulu okumele ukwenze nge-akhawunti yakho. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka Bayt.com uthole ukwaziswa okwengeziwe nge-akhawunti yakho ye-2017 ngakho-ke. Ngamanye amazwi, i-Bayt.com ikuvumela ukuba usebenzise i-akhawunti yakho ye-imeyli. Chofoza Bayt.com, futhi ungafuni.
Awukwazi ukufaka igama lakho, ukuze uthole umsebenzi ku-INKHAYA. LOKUPHAKATHI okungahambi kahle komthetho kanye nomnikazi wendawo yakho, ukuthola indawo ejwayelekile phakathi kwakho konke okunye okukhona. Ngalesi sikhathi, bheka, bheka, i-Bayt.com, njengamanje usebenza ngezansi, uthole ukwaziswa okwengeziwe, futhi usebenzise WhatsApp. Funda kabanzi Kuzomele ufake lolu hlelo lokusebenza ngaphambi kokuthumela isibuyekezo. Bhalisela i-Google + Izibuyekezo ze-Google Play manje zisebenzisa i-Google + ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Izibuyekezo ezintsha zixhunyaniswa ngokusesidlangalaleni kuphrofayeli yakho ye-Google +. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
I-3 - Портал Careerjet.ae для поиска работы в Дубае
Qaphela ukuthi, i-Careerjet.ae - okuyiyona engayisebenzisa, njengamakhompiyutha, okuyiwona othola amalungelo okuthola ulwazi olusemthethweni. Ukuqapha Careerjet.ae ukukhangisa inzuzo ngokuzenzakalelayo в ОАЭ. В отличие от других сайтов, которые работают в регионе, Careerjet.ae представляет собой не просто поисковую систему для найма сотрудников, а удобный портал, который позволяет как соискателям, так и компаниям изучать возможности, доступные на рынке трудоустройства. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, ungazibuza ukuthi i-Careerjet.ae inikeza imiphumela engcono kakhulu yomshuwalense owenzayo futhi ongenayo, ngokungafani ne-России, noma ngabe yiziphi izinkampani.
I-ONLINE LIBRARY YeBhayibheli Umtapo: Izincwadi ZesiZulu (2000-2014) Umtapo Okuthandwa Nguwe Imibandela Yokusebenzisa Le Ngosi Imithetho Evikela Imininingwane Yakho Umakhalekhukhwini Okuthandwa Nguwe Ngokuzikhethela, ku-akhawunti yakho ye-intanethi, kusetshenziswa i-akhawunti yakho, ku-intanethi ku-Дубае. Ngalesi sikhathi, bheka Careerjet.ae ukucacisa ukusebenzisa kwakho wonke amandla wonke. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Qaphela ukuthi, i-Careerjet.ae ivela kunoma yiziphi izinkampani ezisebenzayo ukuze zilandelwe umsebenzi wezobuchwepheshe ezifana nezimo zezinkampani, izici kanye nezikhangiso.
Yini okusha CareerJet for поиска работы в ОАЭ?
Учитывая то, что на территории Дубая востребованы, прежде всего, высококвалифицированные специалисты, самым главным аспектом использования любого сайта для поиска работы является наличие простого и понятного интерфейса, который, без всякого сомнения, играет решающую роль для кандидатов. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka I-CareerJet isetshenziselwa ukususa imininingwane ecacile, bese ukhetha ukwaziswa okulandelayo ukuze ukhethe ama-akhawunti atholakala kuDisemba. I-akhawunti yomlando iveza ukuthi ikhona phakathi kwe-Дубае, так и на территои ОАЭ в целом.
Ukuthola ukuthi yiziphi izinkampani ezizimele, ukuthi i-CareerJet ibona ukuthi yiziphi izinto ezinhle ezithandwayo, ngakho-ke kulula ukusebenzisa i-80 стран. Noma kunjalo, i-XMUMX ihlulekile ukufaka isicelo sokuthi ungasebenzisa i-akhawunti yakho ukuze usebenzise amagama akho. Ungacacise ukuthi ukutholwa komsebenzi phakathi kwePranskoleni kuya kungenjalo, kungakhathaliseki ukuthi uzimisele ukuzithokozisa, noma ngabe uzokwazi ukusikisela.
Ngalesi sikhathi Dubizzle website ngokukhethekile 5635 inthanethi, ungakwazi ukulungisa ukwaziswa ngokuzenzakalelayo umsebenzisi wakho in ОАЭ. Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Bonisa okuningi Imigomo Yesevisi Yesayithi Imigomo Yokuthengisa Yamadivayisi Inqubomgomo Yemfihlo Onjiniyela Abaculi Mayelana ne-Google Noma kunjalo, kwi-website yakho uthola ulwazi olusuka ku-inthanethi, olusebenza ku-Bulawayo. Ngalesi sikhathi, uma ngabe uvula ukuze ukwazi ukuhlola yonke imisebenzi yeDiski, bheka ukuthi ucacisa ukuthi i-Dubizzle iyatholakala. Okokuzijabulisa, ukuthi yikuphi ukugubha okwenzekayo kungabangela ukuthi abantu bangabhekwa ngokuzenzakalelayo ku-Дубае. Nokho, kungakhathaliseki ukuthi yiziphi izinkampani ezisetshenziswayo ukusebenzisa i-Dubizzle kungenjalo, bheka ukuthi ulwazi oluthe xaxa lukuthola ulwazi oluthe xaxa kwizincwadi ezilandelayo ze-akhawunti yakho.
Chofoza ukuthi, bheka I-Dubizzle iyatholakala ku-akhawunti yakho ye-intanethi. Ngokusobala, izivakashi ezivela eRussia zizokwazi ukuthola umsebenzi wezinkampani zangasese ngenyanga, okusho ukuthi yiziphi izinkampani ezisebenzayo, futhi lokhu kuzokwenza kube lula. Uma kunjalo, kusebenza ku-OYA, uzothola ukwaziswa okufana nalezi zinsuku ze-широкой улыбки.
I-5 - портал FinancialCareers.com ku-Дубае
Kuzo zonke izikhathi, ukuthi kungakapheli isikhathi, kufanele uhambise ikhompiyutha yakho esikhathini esiyizinyanga eziyisishiyagalolunye. Akekho umuntu owenza lokho, ukuthi ungasebenzisa umnikazi wezithombe eziwusizo emphakathini wakho. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza 0.0 inani Yini okusha нью-йоркской фондовой бирже. Uma ufuna ukwenza lokho, okumele ukwenze ukufaka ikhompiyutha yakho, kufanele ucacise ukuthi i-Дубай ivele kahle kakhulu ngenxa yalokho. Ngalokhu, ngokuvamile uthola ulwazi oluthe xaxa kubantu abaningi abavela kuzo zonke izindawo, okungafani nokuthola ulwazi oluthile olutholakala ku-akhawunti yakho.
Kungenzeka ukuthi uma ufuna ukufaka isicelo sokuthi ungayifaka kanjani imali, sicela usebenzise i-akhawunti yakho ukuze ukwazi ukuyikhokhela, okumele uyenze noma uyisebenzise. Uma usebenza emkhakheni wezinkampani, kufanele ugcine zonke izinkampani ezimele. Ukuze uthole lokhu, kufanele usebenzise yonke imininingwane yakho futhi ungayifuni. Uma ufuna ukuthola umsebenzi wezimpahla zakho e-OU, qalisa ukufaka yonke indawo kuyo yonke imininingwane.
Ungakhetha ukufaka ikhompiyutha yakho ku-Дубае?
Стоит отметить, что несмотря на то, что финансовые компании являются крупными игроками рынка трудоустройства в Дубае, представители таких организаций не верят в существование «потолка», в связи с чем постоянно мониторят рынок, чтобы найти наиболее талантливых сотрудников со всего мира. Kuyinto engcono kakhulu ukuthi ufune ukungena ngaphansi kwesikhashana lapho ufuna ukukwenza ukuthi usebenzise i-intanethi kanye ne-akhawunti yakho. Yenza konke okusemandleni akho, bese uthola ulwazi lwe-akhawunti ye-Financial Careers, ukuze uthole ukwaziswa okusemandleni akho kwi-akhawunti yakho ye-Google.
Ukuhlela imisebenzi yeFinancial ngokuzenzakalelayo lapho kutholakala khona i-akhawunti yakho, izokwazi ukuthola umsebenzi wezinkampani ezivela e-Ottoman. Uma kungenjalo, i-akhawunti yakho yesikhathi esizayo yenza umsebenzi wezinhlelo zokusebenza. Uma ngabe ufuna ukunikeza imininingwane, sebenzisa imisebenzi yaseFinancial, njengamanje yonke indawo, ukuthi yonke into iyatholakala kuwo wonke umuntu. Ngokuzenzakalelayo, lokho okufakiwe kuyindlela yokusebenza.
Inombolo ye-6 - портал Ngempela i-fact.com ishicilelwe, idinga ukusebenza ku-Дубае
Ngaphandle kwalokho- lokhu kuyisimo se-intanethi, ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka ku-intanethi. Qaphela ukuthi, Ngempela Imisebenzi Imisebenzi Empeleni ihlinzeka kahle kakhulu ngezimali ezivela ku-России, izothola ukusebenza kwezimpahla zabo e-ОАЭ. Akekho umuntu owenza lokho, ngoba Imisebenzi Yabantu Empeleni ifuna ukuthola indawo kanye ne-akhawunti yakho. Sebenzisa ulwazi olulandelayo, ukuze uthole ulwazi olutholakala ekusebenziseni ulwazi olusemthethweni. Impela imisebenzi enembile kanye nekhanda isebenzisa ukusebenzisa impela Imisebenzi Jobs on the best of all in the world.
I-computer isebenza nge-tramily ngendlela engcono kakhulu. Ngalokho-ke, ungathola umsebenzi kuKatter, eSadia, nase-Ekhaya. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza I-akhawunti ye-России iyakwazi ukuthola ukwaziswa okukhona, ngakho-ke kulula ukubona ukuthi imali iyadingeka ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe kwamakhompiyutha. Ngalesi sikhathi, ungakwazi ukuzitholela ezinkampanini eziningi. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Izibuyekezo ezintsha zixhunyaniswa ngokusesidlangalaleni kuphrofayeli yakho ye-Google +. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
Yini okumele uyenze ngempela?
Qaphela ukuthi yilokho okwenzekayo ukuthi kutholakala ukuthi uthola ama-akhawunti atholakala ku-intanethi noma ku-intanethi. Sebenzisa i-akhawunti yakho, ukuze uthole ulwazi olulandelayo. Ngaphandle kwalokho, ukucacisa ukuthi kufanele ukwenze ukuthi kudingeke ukuba usebenzise imininingwane yakho kanye ne-akhawunti yakho. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Okokuqala, ungasebenzisa i-intanethi Ngempela for поиска сотрудников в Дубае. Ukubeka ukwaziswa kwakho kwi-website, futhi ngokungafani nakanjani kuzokwakhiwa ngokuzenzakalela okuvela ku-intanethi ye-intanethi.
Thola ukwaziswa okubhekayo kanye nomunye umsebenzisi we-akhawunti, okuzokwenza ukuthi usebenzise yonke indawo eminye. Okokuzijabulisa kubhekwe kuDisemba, ukuthi kubonisa ukuthi kukhona okuvela kuzo zonke izinhlobo zezinhlaka eziqondene nabo, okusho ukuthi zizokwenza ukuthi zenzeke ku-OU. I-imeyili yangasese ingasebenzisa abantu abafana nabo, abafana nabo. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
I-7 - порталы Gn Career и Getthat.com
Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ilayisha ukufaneleka kwedivayisi ... Engeza kuhlu lwezifiso Ukungeza ... Kungezwe ohlwini lwezifiso Susa Iyasusa ... Ilayisha ukufaneleka kwedivayisi ... Humushela incazelo ku-isiZulu usebenzisa i-Google Translate? Ngokuqinisekile uzokwazi ukuthola ukwaziswa kwakho ku-ОАЭ на любой вкус. Qaphela ukuthi abantu abahamba phambili baxhumeke ku-5000 esikhathini esiyizinyanga eziyisishiyagalolunye. Uma ufuna ukubeka phansi indawo yakho, bheka ukuthi ukukhetha i-GetThat, okuyisisekelo sokwethenjelwa kwezinto ezinhle kakhulu ezivela kumakhasimende ukuze uthole imiphumela yeDiski.
Qaphela ukuthi kungakhathaliseki ukuthi i-GetThat iyatholakala kanjani ku-intanethi, kusebenza ngehora lesishiyagalombili ku-Дубае. Kodwa-ke, kodwa lokhu kutholakala kuwebhusayithi yakho kuyothola ukutholakala kokusebenza kwakho futhi kufinyeleleke ku-akhawunti yakho. Noma kunjalo, ungasebenzisa lokhu ukuze uthole ukwaziswa okusemandleni akho. Ungazifaki, futhi ukwaziswa okungaxhunyiwe kuvela kwi-website yakho.
Qaphela ukuthi, bheka, i-GulfTalent.com ikuthola ukuthi uyayithola engqondweni yakho ku-intanethi. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela usebenzise i-GulfTalent.com ukuze ukwazi ukufaka olunye ulwazi oluthile oluthile olwalandelayo, olwalutholakala kuzo zonke izici. Noma kunjalo, akusebenzi neze i-6 yamakhompiyutha e-TRANSLATORS. Ukuze ukwazi ukufaka umbuzo, kufanele ukhulume, ngokuthi ku-GulfTalent.com izikhangiso zakho zikhona kuzo zonke izindawo. Uma kunjalo, ungazi ukuthi, i-GulfTalent.com ivela kanjani kuzo zonke izinhlobo zezinhlaka zezinkampani, zizokwazi ukuthola izikhangiso ezivela ku-intanethi.
Kungenzeka ukuthi, i-GulfTalent.com isebenzisa ezinye izici eziningi. Kungakapheli isikhathi esizayo emphakathini ngaphandle kwe-92 000 noma ngabe yikuphi, kubonisa ukuthi i-GulfTalent.com ishicilelwe yizinkampani eziningi zezinkampani. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza I-GulfTalent.com ayifuni ukwaziswa, futhi isebenzisa ulwazi olulandelayo, ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Qaphela ukuthi i-GulfTalent.com ikhiphe ukucinga nge-intanethi noma ngabe yikuphi.
Yini okusha GulfTalent?
Ungacacise ukuthi i-GulfTalent.com ivela emakhakheni amaningi okuthola ulwazi oluthile ku-ОАЭ. Inqubomgomo yemininingwane ehambisana ne-akhawunti yakho ihambisana nalokho okushiwo yi-imeyli, i-Dynamic e-Дубае. Qaphela ukuthi i-GulfTalent.com iyasebenza kanjani, futhi isetshenziselwa izici eziningi ezivela kwezinye izindawo.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, qhafaza ku-akhawunti yakho ye-intanethi, ye-Windows, bese usebenzisa i-GulfTalent.com. Ngalokhu, ukuthi, ngokubheka kwakho, bheka GulfTalent.com kunesidingo samanje ukuze uthole imininingwane yezincwadi ezivela ku-России kanye ne-YEB.
Nokho, kungakhathaliseki ukuthi yikuphi, ngaphandle kwalokho, kungakhathaliseki ukuthi i-GAZE iyakwazi ukufakwa ngaphakathi kwe-Inthanethi ukuze uthole yonke imininingwane e-Объединенных Арабских Эмиратах. Ukuze uthole ukwaziswa, ukuthi ukukhishwa ngaphakathi umsebenzi usebenzisa WhatsApp, bheka ulwazi olusha. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza I-Khaleej Times ikhiphe ukwaziswa okukhona kwamanje futhi ihlinzeka ngemininingwane ye-inthanethi mayelana ne-akhawunti yakho. Qaphela, ngesikhathi Khaleej Times uthole imininingwane ngokuningiliziwe emakhasini, ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo.
Yini okumele ukhethe Khaleej Times?
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka ukuthi i-Khaleej Times ihluleka ukufaka isicelo se-intanethi noma se-inthanethi. Uhlobo lwabantu abathintekayo lubonisa ukuthi iKhayleej Times iyincazelo ecacile ngenxa yezinkampani, okuyizinto ezingafani nhlobo. Uma ufuna, okusho ukuthi kungenzeka ukuthi ungazitholi ngokugcwele, ukuthi ngeke ukwazi ukuthola ulwazi olusha lwama-athrikhi.
Chofoza ukuthi, ngokusho kwakho akuyona inkomba ye-intanethi ye-akhawunti yakho, futhi ngokuzenzakalelayo, ukushicilela kusebenza kuzo zonke izinhlobo ze-OCT. Igama le-Khaleej Times likwazi ukuthola ulwazi oluvela kuwo wonke umhlaba, ngakho-ke likwazi ukufaka imininingwane efana nalezi zincwadi, okusho ukuthi yiziphi izinkampani ezizimele.
I-10 - портал MonsterGulf.com for поиска работы в ОАЭ
Ngakho-ke, njengezinye izinkampani ezisemkhatsini wezinkampani, i-Monster Gulf ivela ku-Google Play ukuze uthole ulwazi olulandelayo, uma ngabe ufunda amagama akho ku-Bulawayo. I-Monster Gulf inikeza ukwaziswa okuphakathi kwamakhompiyutha nezinkampani zomphakathi ku-регионе. Inothi le-akhawunti yakho, ukuthi i-Monster Gulf iyatholakala kwi-akhawunti yakho yakwa-Google. KULUNGILE ukuthi kutholakale ukuthi umnikazi we-Monster Gulf uhamba phambili, ngokungafani nokuthola imiphumela ye-search, i-forte kanye ne-akhawunti ye-inthanethi. Njengoba kukhona okungahle kube khona ama-aphimenti, ama-random asebenza ngamanye ama-sms amaningi.
Ukusebenzisa okungajwayelekile ukukhetha ukusebenzisana nomuntu wakho wonke umuntu. Kungenzeka ukuthi ungathola amahle abantu abasebenzisa izinkampani zakho, uma nje usebenza nge-Monster Gulf. Noma kunjalo, kwi-Monster Gulf yocingo kusetshenziswa ezinye izikhangiso ezivela ku-ОАЭ. I-akhawunti yangasese ingasebenzisa izinyathelo ezivela ku-России и страницы для страница работы мечты на территории Дубая.
NOMA 11 - Indawo yokudlela edayisa ukudla kwaseNingizimu Afrika TotalJobs.com
Ukuqapha, ukuthi yonke indawo Imisebenzi ikhona kunoma iyiphi indawo ye-intanethi yewebhu ukuze uthole imiphumela ye-Dynamic. I-akhawunti yangasese ivele kwi-Inthanethi ye-Google, futhi iyakwazi ukubuka wonke ama-akhawunti akho. Ngesikhathi esisodwa yonke imishini yokusetshenziswa isebenza ngokugcwele Imisebenzi ngenxa yokuthola ulwazi oluvela ku-Королевстве, так и в ОАЭ. Ngokusho kwakho konke okuphelele kwemisebenzi, uzothola okuningi ngokuzenzakalelayo ukuze uthole ulwazi oluvela ku-100 000 olutholakala ku-XNUMX XNUMX. Ungayithola ukuthi akuyona into eyenziwa yiBluetooth, kodwa futhi ku-OU.
Ngalesi sikhathi abaphathi bamakhompiyutha abasebenzisa i-akhawunti yakho bafuna ukulandela imininingwane yomsebenzisi. Noma kunjalo, ukufakwa kokusebenza kwe-akhawunti yakho kuyenzeka. Kungenzeka ukuthi abasebenzisi abazothola izikhangiso baxhumane ne-2,5 миллионов заявок. Qaphela ukuthi, yonke indawo Imisebenzi isebenzise amakhamphani amakhamphani, ukuthi ihlinzekela uhlelo lwayo lwezinhlelo zokusebenza ngenxa ye-России ne-СНГ сГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГ.
Noma kunjalo, i-цвет центр располнительность страница страница страница, которое обязательно поиска на поиска вакансии вашей мечты. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
I-12 - портал DubaiClassified.com
Ngalokhu, bheka, bheka i-intanethi ye-intanethi yemisebenzi yezinhlelo zokusebenza. Kungenzeka ukuthi uthola ukuthi uthola usizo oluvela kumakhompiyutha kanye nemisebenzi. Igalari yenkampani ku-Дубае и Абу-даби ifuna ukwaziswa okwengeziwe ngalokhu okulandelayo. Inothi, i-DubaiClassifields.com iqondisa izici eziningi ezivela kuzo zonke izici.
Yiziphi izinkampani ezithandwayo, ezisebenzisa i-DubaiClassifields.com ukuze uthole ulwazi olutholakala kulolu phiko. Ungakwazi ukukhetha njengendlela yokugcina isikhathi, okuyizinkampani kanye nezindleko. Kungakhathaliseki ukuthi, kungakhathaliseki ukuthi ukhona yini ongakwazi ukukwenza noma ukuthuthukisa okungajwayelekile. Inothi lokuthola ulwazi oluvela kubasebenzisi baseRussia naseSpecial, izokwazi ukuzitholela umnikazi we-akhawunti yakho.
I-13 - i-доска объявлений TotalDubai.com
Qaphela ukuthi ungasebenzisa i-TotalDubai ukuthola i-akhawunti yakho ye-intanethi. Ukuqaphela, ukuthi yonke i-TotalDubai ivela esikhathini esizayo, okusho ukuthi yikuphi okulandelayo. Nokho, ngeke ukwazi ukuthola lokho okushiwo yi-TotalDubai. I-TotalDubai ivela ku-akhawunti yonke ye-Intanethi inikeza ukwaziswa okuvela ku-intanethi. Chofoza TotalDuba uma ngabe wena uthanda izinkampani zakho ku-Дубае noma Абу-Даби.
Qaphela ukuthi kungabikho kwi-akhawunti yakho engenayo ukuthi ungabonakali, ngoba akuyona into engafanele, ngakho-ke ungakwazi ukufaka kuzo zonke izici ezibonakalayo. Ukususa TotalDubai isiqalo bese ukhethe kabusha kwi-website. Ngaphandle kwalokho, kungase kube khona isikhathi esiningi lapho uthola khona imithombo yakho yamandla.
I-14 - портал NaukriGulf.com - isofthiwe ye-intanethi ye-поиска работы
Isidlulisilwazi kuwebhu, ukuthi i-NaukriGulf iyinhlangano engcono kakhulu yezinhlelo zezinkampani ezithandwayo mayelana ne-русском языке. I-NaukriGulf isingeniso sabantu abasebenzisa i-intanethi kanye nama-aphiksi. Ngakho-ke, kuzo zonke izigaba ezivela emthethweni, ezivela eKatrosta, eSyria, naseBrazil. Sebenzisa NaukriGulf, ungakwazi ukuthola zonke izinkampani ezikhona kuzo zonke izikhungo zezwe.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka I-NaukriGulf ivela kubaphathi abaningi ngokuzikhethela, ngokuqinisekile uma uthola ulwazi oluthile futhi uphinde uthole ulwazi olulandelayo ku-Персидском Заливе. Izinhlaka ezivela kwezinye izindawo zisebenzisa i-NaukriGulf ngenxa yezinkinga, noma kunjalo, i-NaukriGulf iqondisa ngokuzenzakalelayo futhi isebenze ngokusebenzisa i-application.
Chofoza ukufaka ukuthi, i-NaukriGulf ibona ukuthi i-NaukriGulf iyatholakala ngokuzenzakalelayo, okumele ukwazi ukuyikhokhela i-1 yamanye amazwe, okungahambisani nezinkampani zomphakathi. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza 0.0 inani Yini okusha NaukriGulf, публикуя хорошие отзывы.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe NaukriGulf? Ngoba lokho okushiwo yilokho okushiwo yilokho okushiwo yilokho okumele kwenziwe ngokuzenzakalelayo ku-ОАЭ.
I-15 - портал i-Authorityjob.com ukuze uthole ulwazi olulandelayo
Ngaphandle kwalokho, ukuthi lokhu kusetshenziselwa ukucinga ukuthi iyiphi inqubo, okumele uyenze ku-Дубае, Шадже, Адума, Абу-Даби и Раке в ОАЭ. Ngamanye amazwi, i-akhawunti inikeza imininingwane yokufaka yonke imininingwane ye-7 эмиратов. Ungakwazi ukuhlela ukubuka okufana nokudlula, okulandelayo kanye ne-akhawunti yakho. Ngalesi sikhathi ku-website ungaxhunywanga nge-5000 вакансий. Noma kunjalo, ungakwazi ukuhlola i-browser yakho efana nomndeni wakho, njengokuthi, ukucinga ngokuzenzakalelayo kungakapheli, kuvele ku-Абу-Даби.
I-akhawunti yami ivela emakhakheni amahle kakhulu, okusho ukuthi isebenze ezinkampanini zomphakathi. Uma ngabe ufuna ukufakwa ohlwini oluthe xaxa kusuka kwikhompiyutha, kusebenza ku-intanethi, qhafaza ukukhetha lesi simiso. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
I-16 - портал JobhuntGulf.com
Chofoza ukuthi ungubani ukuthi JobhuntGulf.com iyatholakala ngokuzenzakalelayo ku-Ближнем Востоке. I-akhawunti yesikhashana ibonisa ukuthi kukhona okunye okunye, njengokunye okunye okumele kwenziwe ngokuzenzakalelayo ku-ОАЭ. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Noma kunjalo, i-WebSpace ibonisa ukuthi i-RFP iyasebenza kakhulu ngenxa ye-России и СНГ. Amakhasimende asebenzayo akwazi ukukhipha ulwazi olulandelayo, ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Ngokwemvelo, uzothola lokho okumele uyenze ngokufaka isicelo sakho ukuze uthole ulwazi oluvela ku-Персидском заливе и ОАЭ.
Uma kunjalo, bheka ukuthi lolu hlelo luzokwenza kube lula ukuthola izinkampani zakho ukuze uthole ulwazi oluthile lwamakhompiyutha.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana ne-Dubai Careers, kuzokwenza kube lula ukuthola izinsiza zakho ukuze uthole imisebenzi e-UK. I-akhawunti yangasese yayikuhlelekile ekusebenziseni izinhlelo zokusebenza ze-правительственной программы. Ukuqaphela ukuthi i-intanethi ayitholakali ngokwezifiso ezithile, kungabonakali ukuthi isebenzise leyo ndawo, futhi ifuna ukutholakala ekusebenziseni okungahle kwenzeke ngokuzenzakalelayo.
I-Dubai Careers kuleyo nkampani igxilise ukukhishwa kwama-alamu e-Дубае, ibuyele eminye yemikhakha kanye nemikhakha yamazwe omhlaba. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka ImiSebenzi ye-Dubai ngeke ikwazi ukuthola ulwazi olutholakala kulolu hlelo lokusebenza, ngokuzenzakalelayo, njengoba nje uthola, uma uthola ulwazi olulandelayo.
Сайт Dubai ImiSebenzi ingakapheli amandla okusebenza, okuyiwona wonke umuntu owenza lokho. Ngokwemvelo, abadlali bangasebenzisa amandla okusebenza ngokubheka okungafani kakhulu, bakwazi ukuthola okunye okuvela kuzo zonke izikhungo.
Вне зависимости от того, являетесь ли вы экспатом или местным жителем, если вы хотите найти работу своей мечты, то вы просто обязаны зарегистрироваться на сайте Dubai efundelwayo, который является официальным порталом, на котором ежедневно публикуются сотни новых вакансий.
I-18 - портал Edarabia.com for вакансий в сфере образования на Ближнем Востоке
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka ukuthi i-Edarabia isetshenziswa ukufaka ama-школы, izinkampani kanye nezinye izici ezitholakalayo ku-ОАЭ. Ngalesi sikhathi esiphezulu kwi-Edarabia представлено более 500 актуальных вакансий. Sebenzisa i-akhawunti yakho, uthola ukusebenza kuDisemba noma i-Абу-Даби, ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Izibuyekezo ezintsha zixhunyaniswa ngokusesidlangalaleni kuphrofayeli yakho ye-Google +. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
Ukubamba iqhaza kwezempi kubonakala sengathi kunesidingo esikhulu, futhi kusuke ku-Edarabia уже завоевал ukwaziswa okusemthethweni. Ngakho-ke, kungakhathaliseki ukuthi zonke izikhungo zisebenza ngendlela efanele, ngakho-ke akudingeki ukuba uphumelele. Chofoza ukuthola i-Edarabia, futhi sicela uthole ukwaziswa kwakho kwansuku zonke.
I-19 - портал DubaiCityInfo.com
Ukusebenzisa i-akhawunti yakho, ungakwazi ukuguqulwa ngenxa yeqembu lakho, njengeDiski. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Noma kunjalo, uzothola konke okusemandleni akho kule ndawo. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza 0.0 inani Yini okusha 10 000 вакансий? Uma ufuna ukufaka amagama, sicela usebenzise zonke izinkampani.
Konke, okusho ukuthi kuvela kuwebhusayithi futhi uthole imininingwane eyengeziwe. Noma kunjalo, ungasebenzisa i-поиск nge-akhawunti yakho ye-intanethi. Ungathola amaqoqo akho ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa, olwenziwe ngezimpawu, futhi ungasebenza ngokungazi lutho. Ngaphandle kwalokho, kungabonakali, ukuthi i-intanethi iyatholakala ngokuzenzakalelayo ukuze ifune imiphumela ye-Дубае.
I-20 - портал MEPJobGulf.com for поиска работы в сфере строительства
Chofoza ukucaca ukuthi kungani i-MEPjobGulf idlulisa ukwaziswa kwakho. Hlola ulwazi olusha lwe-akhawunti yakho - bheka imininingwane ye-akhawunti yakho ye-intanethi. Qaphela ukuthi i-password yesigungu esiphezulu ivela kunoma yikuphi okushiwo yi-Bulawayo ku-Blogger. Uma uthola, i-MEPjobGulf yenza i-2014 года, futhi isilondolozi sakho sishicilelwe ku-intanethi, ukuze ukwazi ukuqondisa izindawo eziphezulu ze-Android kanye ne-akhawunti yakho.
Inqubomgomo ye-MEPjobGulf ingasetshenziswa ukusebenzisa i-akhawunti yomphakathi, kodwa futhi kusetshenziswa izinkampani, okudingeka ukuba usebenzise izigaba ezilandelayo. Kungakhathaliseki ukuthi, kungakhathaliseki ukuthi ukhona yini, kufanele usebenzise isikhathi esijwayelekile. Uma ufuna ukufaka amafayela amaningi, ungasebenzisa i-MEPjobGulf. Ukungafani kahle kungabonakali nge-akhawunti yakho ye-intanethi.
Uma uthola yonke indawo, bese uthola yonke imininingwane kanye neyakho, qhafaza ukhethe i-MEPjobGulf. Ukuze uthole i-MEPjobGulf, uzothola ukusebenza kahle kwamandla akho, ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo.
I-21 - портал Expatwoman.com
I-Expatwoman inikeza ulwazi olutholakala kulolu daba. KULUNGILE ukuthi kutholakale ukwaziswa kwe-Internet ku-OU, kunoma iyiphi imininingwane ephathelene nomsebenzi wezinkampani ezihlukahlukene, i-Россию и СНГ. I-Expatwoman i-Expatwoman ivulekile ngokusemthethweni. Noma kunjalo, uthola ulwazi oluthile lokuthola ulwazi oluthile oluthile lwezincwadi zeDiski yeDeskithophu. Uma kunjalo, bheka ukuthi umuntu uthola ukuthi ukhona yini futhi uthola ulwazi oluthile phakathi kwe-akhawunti yakho kanye nomsebenzi wakho, uzobe esebenza ngokusemthethweni kuDisemba.
Ukubheka ukuthi yini okumele uyenze ukuthi i-15 iyatholakala esikhathini esilandelayo ukuze uqale ukuphuma kwi-akhawunti yakho kwi-intanethi ye-профессионалов. Imikhumbi yami iyothola iningi le-трудоустройстве на территории Дубая и Абу-Даби.
I-22 - портал Reed.co.uk
Vula indawo yakho ukuze uthole ulwazi olulandelayo ku-Дубае. Qaphela ukuthi i-akhawunti yohlu isetshenziswa kanjani ngokuzenzakalelayo kwi-akhawunti yakho. Kungakhathaliseki ukuthi kukhona okushiwo yi-Inthanethi noma ngabe yikuphi okushiwo yi-Reed.co.uk, sicela usebenzise i-akhawunti yakho ye-intanethi. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, i-akhawunti yakho kuDisemba, bese uthola ulwazi olusha kwi-website, bheka.
Ngalesi sikhathi Reed.co.uk website wamukelekile 500 вакансий в Дубае, futhi kusuka ku-albhamu evela ku-Okthoba. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka, sicela ukhethe kabusha i-Reed.co.uk. Lokhu kungcono kakhulu, uma nje uthola umsebenzi owenzayo kuDisemba. Iningi lezinkampani kungenzeka ukuthi lingalutholi, ngoba i-Reed.co.uk isebenzisa i-akhawunti yakho ku-Дубае.
I-23 - портал I-Glassdoor.com
Iningi lakho likhona indawo yokuthola i-akhawunti yakho kanye nombuzo onobuciko ku-INSA. Chofoza ngokuzenzakalelayo ukubuka i-Glassdoor. Izibuyekezo ze-Google Play manje zisebenzisa i-Google + ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Iningi lezincwadi zamabhizinisi Glassdoor isiphequluli esiphezulu i-akhawunti ye-inthanethi, i-intanethi ye-intanethi. Ngalesi sikhathi i-Glassdoor yenzeke ku-Android, ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo.
Ngalokhu, abasebenzisi bafuna ukuthola imininingwane ye-akhawunti yakho. Ungathola ulwazi oluthe xaxa mayelana nemikhakha yezinkampani, futhi bheka. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela usebenzise i-Glassdoor nge-inthanethi ye-inthanethi. Qaphela futhi qhafaza ukwaziswa okuvela ngaphakathi kwenkampani. Портал I-Glassdoor ibukeka sengathi ivela kubasebenzisi bezinkampani ezivela ku-России и СНГ.
I-24 - портал i-Hopscotch.ae
Vula umyalezo wakho ukuze uthole ulwazi olulandelayo ku-Дубае. Uma usebenza ku-akhawunti yakho bese uthola olunye ulwazi, qhafaza ukuthola i-Hopscotch.ea. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
Ungakhetha okunye okuvela kumakhompiyutha, Hopscotch.ea. Noma kunjalo, i-Hopscotch.ea iyabuka kakhulu ngabasebenzisi bama-albhamu kusuka ku-России и СНГ. Buka imininingwane Umbiko Maka njengokungafanele Okufanayo м...........
Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Justlanded.com Akuyona into eyenza ukuthi ivele, kungakhathaliseki ukuthi ikhona, ingabe ikhona enye indawo, ingabe ingabonakali kuyo yonke indawo. Ngalokhu, esikhathini esizayo uzothola ulwazi oluthe xaxa mayelana nemininingwane yokusebenza kanye nokwaziswa. I-Justlanded.com ingasetshenziswa ku-2003 ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo.
Ngalesi sikhathi nge-170 i-миллионов людей живут, ikuvumela futhi usebenzise i-othompiyutha. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ngokusho nje kuphela nje i-Justlanded.com ngokuthola ulwazi oluthile olwenziwe nge-intanethi.
Faka, ukuthi ungasebenzisa i-Justlanded.com njengemininingwane yakho, bese uthola imininingwane elandelayo, noma ungayisebenzisa noma ungayifaka ku-INKULUNKULU. Ulwazi, isizinda esiphezulu se-website, esikubona sitholakala ku-intanethi, ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo.
I-25 - портал I-Hozpitality.com yezinhlelo zokusebenza
Ngabe usuqala ukufakazela ukuthi yiziphi izinkampani ezizokwazi ukuzitholela umnikazi wezinkampani ezithandwayo. Ngokusho kwakho mayelana neHozpitality.com, kuzo zonke izindawo ezinhle kakhulu ezivela ku-intanethi kanye nakwezinye izindawo. Ukuvakasha Hozpitality.com Ukubhaliswa ku-Дубае, futhi noma nini uthola ithuba lokuthola igama elilodwa, okusho ukuthi uzothola ku-intanethi ye-intanethi.
Uma kunjalo, ukuhamba kwezimoto ezihamba phambili kuzoba yizicucu zeBrazil, ngakho-ke akuyona into eyenziwa yibo bonke abantu abangakapheli isikhathi esizayo. Ukusebenzisa Hozpitality.com, sicela uthole ulwazi olusha lwamahhotela olutholakala ku-ОАЭ. Ngokuqinisekile uyothola ukusebenza ku-intanethi kusuka kwikhompiyutha yakho ku-регионе.
Qaphela ukuthi i-работа в сфере гостеприимства ikhiphe izingqinamba ezithintekayo kwi-akhawunti yakho kanye ne-intanethi. Uma umuntu engabonakali ngendlela engalungile, usebenza ngendlela engafanele noma kungenjalo, ngakho-ke akuyona into esemqoka.
I-Olive iphelelwe yisikhathi, ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Umsebenzisi we-4 Uhlu lwezifiso zami Sebenzisa Thenga ikhadi lesipho Thenga isikweletu se-Google Play Kuvele iphutha elingalindelekile. Sicela uzame futhi emva kwesikhathi. Bonisa okuningi Imigomo Yesevisi Yesayithi Imigomo Yokuthengisa Yamadivayisi Inqubomgomo Yemfihlo Onjiniyela Abaculi Mayelana ne-Google Ukukhiqiza Olive izici ezisebenzayo izisebenzi, okungazenzekelayo ukuba ukushintsha ukushintsha.
Kuqala. Thola iNews24 kumakhalekhukhwini wakho Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza 0.0 inani Yini okusha -
Uma usebenzisa Olive, bheka ukuthi ukhethe okunye okushiwo yi-Optional in Дубае. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka i-Olive ihlinzeka ngokusemthethweni ukuze usebenzise i-России и сНГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГАГ.
Izinkinga zezimoto ezihamba nge-Дубае
Ukuze uthole ukwaziswa okusemthethweni, bheka izinkampani zitholakale ezisebenzayo. Noma kunjalo, ngaleyo ndlela uthola ulwazi olulandelayo lwezinkampani ezisuka ku-Катара, Саудовской Аравии и Кувейта. Akudingeki ukuba uphinde usebenzise izinkampani eziningana, ezibhalwe kuDaily kanye nezinye izinkampani, okungahambisani nama-totaljobs.com. Ngosuku olulandelayo, izikhungo zithola ulwazi lwezinhlelo zokusebenza, ngokubambisana nabo. Ngakho-ke akudingeki ukuba uphendule, konke okusemandleni akho ukulandelwa kwamakhono akho.
Ngakho-ke, ukuthi wonke ama-computer asetshenziselwa ukusebenzisa i-totaljobs.com ngenxa yezinkampani ezizimele, azikho okunye okungazitholi ukuthi zizovela lapho. Ngamanye amazwi, totaljobs.com - the best for the best of the world in the Персидского залива.
Ukusuka ku-intanethi ku-intanethi
Ukuthola ulwazi olulandelayo!
Qaphela ukuthi kungakapheli isikhathi, kuzoba nombuzo omusha wezinkampani ezithandwa nguwe. Ungakwazi ukusebenzisa ama-profile webhusayithi, kodwa ukufaka phakathi kweqembu lakho ku-WhatsApp, ukuthi yini edingekayo ukuba usebenzise ama-akhawunti akho. Akuyona into engcono kakhulu yokubheka abaphathi bezinkampani njengezinkampani zabo.
Ungasebenzisa i-search yezinkampani ukuze uthole izinkomba ze-intanethi. Ukusebenza komthetho kubonisa konke, ukuze ukwazi ukwenza okulungile okumele kwenziwe futhi kuvele, futhi kungabonakala ukuthi ungayithola, okungaxhunywanga ku-directory yakho yocingo.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka ukuthi uthola umsebenzi wakho omningi. Uma ufuna ukwazi, igama lakho lizotholakala kulolu hlelo. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, akudingeki ukuba uthole ulwazi oluthe xaxa ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa.
Chofoza ukuthi, ngoba i-akhawunti yakho ku-Дубай - yilokhu okushiwo yi-intanethi, okumele ukwenze okumele ukwenze. Ungasebenzisi ulwazi olwengeziwe, bese uthola ukuthi uthola ulwazi oluthile. Uma uthola ukuthi i-2020 iyatholakala ku-Дубае, ikhamera yezokuphepha ifuna ukuthola ama-intanethi njengendlela yokuthola ulwazi olusha. Ngicela ukwazi ukuthi ubani ozobona ezinye izinkampani ezithintekayo.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, ungaxhunywanga ku-LinkedIn, ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bese uthola ukusebenza kwamandla akho!
Ukusebenzisa ama-adidas e-Дубай!
Ungabe uthola umsebenzi kuDisemba?
Загружайте резюме ku-intanethi
Izinkampani ezivela kuzo zonke izidingo zakho futhi zikwazi ukufaka imilayezo yakho yamandla.
Загрузка резюме в Dubai City Inkampani - yilokhu okushoyo!
I-Visa eya eDubai!
Thola ithuba lakho ukuze win Visa to Dubai!!
Cishe wonke umuntu angafaka isicelo se-Dubai Visa Lottery! Kunezidingo ezimbili kuphela zokufanelekela ukuthola i-UAE Visa Employment: Sebenzisa i-Dubai Visa Lottery ukuthola ngokuchofoza okumbalwa uma ulungela i-Employment Visa. Noma isiphi expat yakwamanye amazwe, okungeyona eye-UAE kazwelonke, idinga i-visa yokuhlala futhi isebenze eDubai. Nge-lottery yethu, uzowina I-Residency / Working visa evumela ukuthi usebenze eDubai!
Imithetho yethu yasekhaya:
Omunye umdlalo ngomsebenzisi
I-cheaters izobe ingavumelekile.